Umugqa wamehlo wesilisa - amathiphu amahle kakhulu okunakekela kwakho siqu | Amadoda aSitayela
Umugqa wamehlo wesilisa
U-Alicia tomero | | Izimonyo, Ukunakekelwa komuntu siqu
Umugqa wamehlo wamadoda wenzelwe lawo madoda wesikhathi sethu. Manje yilapho besinakekela kangcono isithombe sabo, futhi yilokho bayathanda ukuzinakekela futhi bayazi ukuthi imiphumela isobala. Uma uthanda ukunakekela ukubukeka kwakho uzobe usuthole ukuthi kunzima ukusula imiphumela ende yesonto eliqothulayo noma ukuthi le ndawo isivele idlula ukonakala kwento ebonakalayo njengezinyathelo zeminyaka.
Awukwazi ukungayinaki indawo ezungeze amehlo, ngoba le ndawo ichaza iminyaka yomuntu. Ukubukwa kwamehlo kwabesilisa kungokhilimu abanakekelwa yibo, futhi lokho kuholela ekufakeni inqubo ejwayelekile yansuku zonke neyomuntu siqu. Ukufaka umkhiqizo ngendlela efanele kubalulekile ngenqubekela phambili enhle, Ngaphandle kokukhetha umugqa omuhle wamehlo okhombisa amandla okwenza umsebenzi wabo kahle.
1 Ungawusebenzisa kanjani umugqa wamehlo kwabesilisa
2 Izinyathelo zohlelo lokusebenza oluhle:
3 Izithako okufanele ziqukethe umugqa omuhle weso
4 Imikhondo yamehlo engcono kakhulu yabesilisa
4.1 Umugqa Wamehlo weClinque
4.2 UNezeni, ngokwakhiwa okusha
4.3 Inani Lokuvuselela u-Eve nguShiseido
4.4 Umugqa wamehlo we-Oskia
4.5 Abakwa-L'oreal Men Experte Hydra Energetic- Roll on
Ungawusebenzisa kanjani umugqa wamehlo kwabesilisa
Umugqa wamehlo yilolo ungqimba lwesikhumba olumboze indawo ezungeze amehlo.. Yindawo entekenteke ngakho-ke kungenzeka ukuthi ihlushwe yizimpawu ezibonakalayo ezifana nemibuthano emnyama noma izikhwama, konke okutholakala ekukhathaleni noma ezintweni ezahlukahlukene ezifana nobudala, ukubhema, ukuphuza, ukudla okungafanele, njll. Kungcono ukusebenzisa lolu khilimu kusuka eminyakeni engama-30, okuyilapho lezi zimpawu ziqala ukuvela.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ukufakwa kontanga yamehlo akufani nokwanoma yimuphi ukhilimu, ukukwenza ngendlela efanele kuzokukhuthaza ukuthi uqhubeke uzinakekele ngoba uzobona ukuthi imiphumela yabo emihle isabela kanjani.
Izinyathelo zohlelo lokusebenza oluhle:
Ngokufanelekile, yisebenzise ekuseni nasebusuku, kodwa okungenani kanye ngosuku.
Faka ingxenye encane yomkhiqizo ezansi kwamehlo akho, yize ungangeza ukhilimu ngaphansi kwamashiya.
Akufanele ususe umugqa ukuthi uma ufaka lolu khilimu kanjani kodwa ngokuthepha ngomunwe wakho.
Sebenzisa umunwe wakho wenkomba ukunikeza lokho kuthintwa bese uzama ukusabalalisa umkhiqizo endaweni yomsele wezinyembezi, kufanele ukwenze lokhu kuze kube yilapho ukhilimu usungene ngokuphelele.
Izithako okufanele ziqukethe umugqa omuhle weso
I-Retinol iyi-vitamin AIbalulekile kule ndawo njengoba isiza ukuhlela kabusha leyo ndawo nokusiza ekwehliseni imigqa emihle.
I-Hyaluronic Acid: Kuyingxenye yemvelo esiza ukukhuphuka kwamaseli esikhumba nokunciphisa imibimbi.
Ama-peptide: baphethe ukwakha i-collagen. Uzobona ukuthi isikhumba sakho silahlekelwa ukuqina, ukuthi siwela ngaphansi kwesisindo saso kanye nefomu lemibimbi, eminyakeni edlule. La ma-peptide azosiza ekukhiqizeni nasekuvuseleleni kabusha i-collagen futhi ngaleyo ndlela alwe nokuguga.
Ukuvikelwa emisebeni yelanga: Kufanele ukhethe ukhilimu osebenza njenge-sunscreen, ngoba ngokwengxenye kusolwa ukuguga isikhumba sethu uma sisigcina siveziwe. Okunconyiwe yi-SPF 50 engavimba kuze kufike kuma-99% emisebe ye-UVB.
Imikhondo yamehlo engcono kakhulu yabesilisa
Umugqa Wamehlo weClinque
Lo khilimu usiza ukulungisa imigqa emihle nemibimbi, kwakha ukuqina endaweni futhi kuyinikeze ukuqina. Ngenxa yenhlanganisela yama-peptide, ukukhishwa okumhlophe kwe-birch kanye ne-whey protein, kuzosiza ukulwa nezimpawu zokuguga ngokwakha ukukhanya.
UNezeni, ngokwakhiwa okusha
Lo khilimu uheha ngemiphumela yawo futhi yingakho uzibeka endaweni yokuqala ohlwini. Kuqukethe i-Cobiolift futhi kunikeza isiqinisekiso sokuqeda imibimbi engafika kuma-47%. Inikezela nge- bushelelezi obukhulu, buqinile futhi buqinisa indawo.
Inani Lokuvuselela u-Eve nguShiseido
Lo mkhawulo usebenza kahle kakhulu futhi ufuneka kakhulu. Iphefumulelwe ukwelashwa kwe-hyaluronic acid ukuze nciphisa izimpawu zokukhathala, ukoma futhi ulwe nezimpawu zokuguga. Kuyasiza futhi ekunciphiseni ukubukeka kwemibuthano emnyama futhi kusiza ukuhambisa indawo kangcono kakhulu.
Umugqa wamehlo we-Oskia
Lo mkhiqizo unikeza imiphumela emihle kakhulu futhi unjalo sibonga izakhamzimba zayo ezicebile ngama-peptide, ama-antioxidants nezakhamzimba ezisezingeni eliphakeme. Ama-bioactives ezitshalo akhanyisa indawo yemibuthano emnyama futhi athambise leyo migqa emihle yokukhuluma, anciphisa ukukhukhumeza kwamehlo futhi avikele i-DNA.
Abakwa-L'oreal Men Experte Hydra Energetic- Roll on
Lo mkhiqizo uku-Roll ngefomethi futhi kusebenza kakhulu ukukusebenzisa ngenxa yalolu hlelo olusha. Banokulinganiswa okuhle kakhulu emakethe futhi yilokho ivuselela ngokushesha futhi ivuse isikhumba. Yehlisa izikhwama nemijikelezo emnyama ngesiqinisekiso, kanye nokulwa nezimpawu zokukhathala.
Uma inkinga yakho iyimibuthano emnyama kulesi sihloko singakutshela ukuthi yikuphi okuhle kakhulu amakhambi emvelo okulwa nawo nemikhiqizo yemibuthano elwa nobumnyama ongayithola emakethe.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Umugqa wamehlo wesilisa
Umoya oyisicaba emadodeni
Ukudla okunamaprotheni amaningi